Amanqaku kaJon Croy Martech Zone |
Amanqaku ngu UJon Croy
UJohn ngumseki-ntsebenziswano kunye neGosa eliyiNtloko leNtengiso le Point Ngaphakathi. Inqaku Ngaphakathi lenze ezona ndawo zinokuhla, ezinobutyebi kunye neendleko ezifanelekileyo kwiqonga lemephu yangaphakathi kwiplanethi.
Ngaba i-2018 yoThengiso loNyaka ifile? Nantsi indlela yokuGcina
NgoMvulo, Aprili 16, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 UJon Croy
Abantwana kunye neentliziyo zabakhathazwa ngokufanayo kukuwa kweToys 'R' kuthi, ishishini elomeleleyo kunye nomtya wokugqibela oshiyekileyo ojolise ikakhulu kwimidlalo yokudlala. Isibhengezo sokuvalwa kwevenkile sisuse lonke ithemba lokuba indawo enkulu yokuthengisa- indawo yolangazelelo lwabazali, ubukumkani bemimangaliso yabantwana- inokugcinwa. Eyona nto ibuhlungu kukuba iToys 'R' yethu ibinokusindiswa. Ivenkile enkulu enezinto zokudlala yawa lixhoba layo